Star njem. Nhọrọ nke akwụkwọ banyere usoro izizi | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Star njem. Nhọrọ nke akwụkwọ banyere usoro izizi
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | akụkọ sayensị emeghị eme, Akwụkwọ
Star mee njem ahụ bụ Sci-fi kacha mara amara ọ bụghị site n'akụkọ ihe mere eme telivishọn, kama site n'oge niile. Onye Gene Roddenberry kere na otutu nsụgharị na ọtụtụ usoro ihe karịrị afọ, ndị mbụ foduru ihe kachasị akara ngosi. Na taa na-esote ụbọchị 26 na ụbọchị ọmụmụ Ndị na-akwado ha: William Shatner, onye ruru afọ iri itoolu, na Leonard nimoy, onye nwụrụ na 2015 ma ọ ga-erukwa ọnụ ọgụgụ ahụ. Onyeisi James Tiberius Kirk na mr spockAgbanyeghị, ha agaghị anwụ anwụ. Yabụ, m banye n'ọnọdụ trekki na e nwere otu aha aha - N'ime ọtụtụ narị narị akwụkwọ e nwere banyere ha na usoro. Ogologo ndụ na ọganihu.
1 Star Trek: Ọgbọ Ọgbọ - Doc Shepherd
2 Star njem. Ikpeazụ Ikpeazụ - Carlos Díaz Maroto na Luis Alboreca
3 Bible Trekkie - Ramón nke si Spain, Jordi Sánchez, Sergi Sánchez na Antonio Trashorras
4 A bụ m Spock - Leonard Nimoy
5 Physics nke Star Trek - Lawrence Krauss
6 Ncheta Star Trek - William Shatner na Chris Kreski
7 Leonard: Ndụ - William Shatner
Star Trek: Ọgbọ Ọgbọ - Doc pastọ
Aha nke ụlọ obibi akwụkwọ Dolmen bipụtara, bụ nke kachasị ọhụrụ na-elekwasị anya tumadi na mbụ usoro (nke e bipụtara n’agbata 1966 na 1969) na Ihe nkiri 6 nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri mbụ azụmahịa (gbara n'etiti 1979 na 1991). Na-achịkwa ya James T Kirk, ndị ọrụ ahụ bụ onye ọrụ mbụ ya, bụ Vulcan Mr. Spock, dọkịta Leonard ọkpụkpụ McCoy, onye na-ahụ maka nkwukọrịta Ahuhu, engineer engineer Scott na ndị isi ọrụ Chekov na Sulu. Aha asaa ndị gaferelarị ụdị ahụ n'ụdị ya niile: telivishọn, akwụkwọ, ihe ọchị ma ọ bụ sinima.
Akwụkwọ a zara ụfọdụ ndị ajụjụ ndị ọzọ gbasara ya site na mmalite ya na aha ya dị iche iche na-eru taa. Na ihe niile tinyere nkọwa na nkwupụta nke ọtụtụ aha ndị ka bụ akụkụ ya.
Star njem. Ikpeazụ ókè - Carlos Díaz Maroto na Luis Alboreca
Nnọọ keukwu, ọ na-agwakwa anyị banyere ya malite nke usoro, ka ndị edemede na-enyocha aha site na aha ọ bụla merenụ. Ha na-ekwukwa banyere usoro ihe nkiri, ihe nkiri igwe ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri mbụ, yana ịtụle ihe nnukwu ihe ngosi nke emeputara ma na-aga n'ihu na-emepụta, yana mgbakọ ruo ọtụtụ afọ ma ọ bụ ahia ahia gburugburu.
Bible Trekkie - Ramón si Spain, Jordi Sánchez, Sergi Sánchez na Antonio Trashorras
E bipụtara ya na 1995 ma bụrụ isi ndu ghara ida na njedebe nke akụkụ nke usoro ahụ nwere ma gụnye: site na ihe nzuzo nke ihe ịga nke ọma ya, nke mụbara mgbe mgbasa ozi ya kwụsịrị, ihe odide ya na oge kachasị ebube, ntopute ya na sinima na ụdị ya na-enweghị atụ n'ụdị ọ bụla.
Abụ m onye nzuzu - Leonard Nimoy
Enweghi ike ịhapụ otu autobiography nke onye na-eme ihe nkiri nke na-egwuri egwu kachasị mma site n'usoro isiokwu ahụ, na Maazị Spock bụ onye gaferelarị ya. E bipụtara ya ebe a na 2009 ma ọ bụ ntụgharị nke mbụ Abụ m spock 1995. Nimoy gwara ya kọntaktị mbụ na nkọwa n'oge ọ bụ nwata na mgbe ahụ na-elekwasị anya Star mee njem ahụ ebe ọ bụkwa onye nduzi.
Ọ dịkwa mkpa gụnyere ya ịmepụta Spock na mmekọrịta ya na ya, nke na-ewere ọnọdụ na mkparịta ụka. Achọrọ tebulu ọhụụ ahụ nke o bipụtara na akụkọ ndụ ya mbụ, nke o bipụtara afọ 30 tupu mgbe ahụ n'okpuru aha nke Abụghị m Spock, ebe hapụrụ echiche na gọnahụrụ nke agwa.
Fisik nke Star Trek - Lawrence Krauss
Nke Lawrence Krauss dere na 1995, ọkà mmụta sayensị na dọkịta na Nkà Mmụta Ahụike, gosipụtara okwu mmeghe site n'aka Stephen Hawking n'onwe ya. Ma tugharia ma jua ajuju ohere sayensị nke emere na Star Trek eluigwe na ala. Lee ọ bịara na 2012, dabere na ụdị nke onye edemede dere na 2007.
Icheta Star Trek - William Shatner na Chris Kreski
Na ndị na-agba ume site na Bekee, a gaghị echefu ndị a ihe ncheta nke Willian Shatner, bụ onye bịanyere aka n'akwụkwọ ọtụtụ akwụkwọ na ụwa Trekkie. Onye omekorita nke Canada, n'agbanyeghị ọrụ telivishọn ndị ọzọ na usoro ndị ọzọ Star mee njem ahụ, ọ gaghị akwụsị ịbụ Captain Jim Kirk. Ma ọ na-aga n'ihu karịa na-arụsi ọrụ ike na netwọk mmekọrịta. Na aha a, nke pụtara na 1993, ọ na-agwa anyị banyere ya akụkọ na ọhụụ onwe onye banyere usoro na ihe nkiri, na gbanyụọ igwefoto.
Leonard: Ndụ - William Shatner
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị bụ onye trekki pro, otu esi enweta aha a, ebe Shatner na-agwa anyị nke ya ma ọkachamara na mmekọrịta onwe onye na Leonard Nimoy. Ha abụọ kwetara dị ka ndị na-eme ihe nkiri na usoro nke usoro Onye ọrụ CIPOL (Nwoke nke UNCLE), n’afọ 1964. Ha echeghị na mgbe afọ abụọ gachara, ha ga-ahụ onwe ha na usoro ọhụrụ na-akpọ ndị isi okwu ga-aka akara ndụ ha niile. N'otu oge ahụ, mmekọrịta ọkachamara ahụ ghọkwara a ọbụbụenyi onwe nke ahụ ga-ewe afọ iri ise.
N’ụzọ mmetụta uche Shatner na-agwa anyị akụkọ banyere ọbụbụenyi ahụ, ya na ọtụtụ akụkọ na ndị ọzọ amabeghị banyere ndụ ha na mgbe ahụ. Ma dee otu n’ime ha ụtụ nke ahụ anaghị adịkarị n'etiti ndị na-eme ihe nkiri.
Isi Iyi: Ebe nchekwa Alpha Fandom
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » akụkọ sayensị emeghị eme » Star njem. Nhọrọ nke akwụkwọ banyere usoro izizi
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Họrọ sonnets
Gabriel Celaya. Afọ ncheta nke ọmụmụ ya. Eke